CISM စာမေးပွဲ့ Prep – အဆိုပါ InfoSec စာမေးပွဲတွင် Crush
CISM စာမေးပွဲ့ Prep
အဆိုပါ CISM သို့မဟုတ်လက်မှတ်ရပြန်ကြားရေးလုံခြုံရေး Manager ကစာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးမန်နေဂျာများအတွက်အများဆုံးဂုဏ်သိက္ခာအထောက်အထားများတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အထက်ပိုပြီးအားဖြင့်ရရှိခဲ့သည်ခဲ့ 27,000 ကမ္ဘာအဝှမ်းမှပညာရှင်များ.
ထိုကဲ့သို့သောအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်မဂ္ဂဇင်းအားဖြင့်အမြင့်ဆုံးပေးချေလက်မှတ်အဖြစ်စာရင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုအတူ, ဆုံးနှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက်လက်မှတ်တွေမြော်လင့်သည်တစ်ဦးအဖြစ်စာရင်းသွင်းခံရ, သြစတြေးလျနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, တစ် CISM သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးချဲ့တစ်-များမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်. သင်စာမေးပွဲယူရန်စီစဉ်နေသည်ဆိုလျှင်, အောက်ပါအချက်အလက်သင့်ရဲ့လမ်းအပေါ်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်.
CISM စာမေးပွဲလိုအပ်ချက်များကိုသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးအတွက်အတွေ့အကြုံငါးနှစ်ကြာလို့သတ်မှတ်တယ်, တစ်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးမန်နေဂျာအဖြစ်အတွေ့အကြုံနှစ်နှစ်၏နိမ့်ဆုံး, နှင့်, ၏သင်တန်းကို CISM စာမေးပွဲဖြတ်သန်း. သင်က CISA နှင့်အတူအထွေထွေအလုပ်အတွေ့အကြုံနှစ်နှစ်အစားထိုးနိုင်, CISSP လက်မှတ်, သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးသို့မဟုတ်အခြားဆက်စပ်လယ်ပြင်၌ဒါမှမဟုတ်ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီ.
သင်သည်လည်းသဘောတူနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျင့်ဝတ်နှင့်အ CISM စဉ်ဆက်မပြတ်ပညာရေးမူဝါဒ၏ ISACA ရဲ့ Code ကိုလိုက်နာရန်ရပါလိမ့်မယ်. သင်ဟာအလုပ်အတွေ့အကြုံကိုသင့်နိမ့်ဆုံးငါးနှစ်ကြာဖြည့်ရှေ့တော်၌ထိုစမ်းသပ်မှုယူရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်, သင်အလုပ်အတွေ့အကြုံကိုဖြည့်စွက်ထားမှီတိုင်အောင်သင်တို့မူကားလက်မှတ်ကိုရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး.
CISM လက်မှတ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုသင် ISACA ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်မှတ်ပုံတင်ရန်ရည်ရွယ်ပုံကိုဖြစ်စေမပေါ်တွင် မူတည်. ကွဲပြား. တစ်ဦးလက်မှတ်လျှောက်လွှာကြေးအပြင် $50, သင်တို့စပ်ကြားဆပ်ဖို့မြျှောလငျ့နိုငျ $625 နှင့် $750 အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ကြေးဒါမှမဟုတ်စာမေးပွဲတစ်ခုဖက်စ်သို့မဟုတ်စာပို့ခမှတ်ပုံတင်ကြေးဖြစ်စေသည်. သင်တို့သည်ဤအဈေးနှုန်းများမဆိုအပေါ်ကြီးမားဈေးလျှော့များအတွက် ISACA ပူးပေါင်းနိုင်. တစ်ဦးရှိပါတယ် $50 သင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်စာမေးပွဲနှင့်တစ်ဦးမှအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဘို့အခကြေးငွေ $100 ပြန်အမ်းငွေ processing များအတွက်အခကြေးငွေ.
သင် CISM စာမေးပွဲသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ရယူရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်ပြန်ကြားရေးလုံခြုံရေးသင်တန်းများ၏နံပါတ်ရှိပါသည်, တချို့တောင်မှသင့်ရဲ့ CISM လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဆီသို့ဦးတည်ရေတွက်. CISA နှင့် CISSP လက်မှတ်တွေအလုပ်အတွေ့အကြုံနှစ်နှစ်ဦးရေအများဆုံးထွက်သည်သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်.
အထွေထွေသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးလက်မှတ်များသို့မဟုတ်စံပြသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို အသုံးပြု. အနေနဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၏တစ်ပြီးစီးအလုပ်အတွေ့အကြုံတစ်နှစ်အစားထိုးအသုံးပွုနိုငျ. သင့်လာတာနဲ့အမျှရမှတ်တွေတိုးတက်လာရန်သင့်အသိပညာမြှင့်တင်ရန်တက္ကသိုလ်များအမျိုးမျိုးမှာသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်.
ထို ISACA ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ၏နံပါတ်ပေးသည်နေစဉ်, သင်သည်လည်းသင့်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်တက်တိုက်မှအွန်လိုင်းထို့နောက် alternate လေ့ကျင့်ရေးရှာနိုငျ, စာမေးပွဲနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုလေ့လာသင်ယူ, နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စမ်းသပ်မှုသွားသင်ကိုယ်တိုင်ကိုပြင်ဆင်. သင် ISACA ကပေးအပ်အွန်လိုင်းသင်တန်းများနှင့်အတူကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်လာတာနဲ့အမျှရမှတ်ဆိုတော့သင်တို့အခွင့်အလမ်းတိုးဖို့ဒီဇိုင်း Non-ISACA ပစ္စည်းကိုသုံးပါနှင့်လေ့လာမှုစည်းရုံးနှင့်အတူကူညီနိုင်.
ထို CISM လက်မှတ်ဘို့သင့်ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးတာနဲ့, သင် ISACA မှတိုက်ရိုက်လမျးညှသော်လည်းအဘယ်သူမျှအခမဲ့လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများနှင့်လေ့လာမှုအများအပြားဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်. ဤရွေ့ကားအရာရှိတဦးကလေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများကိုလက်မှတ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်နေသည်စံပြများမှာ, ဒါပေမဲ့တခြားရွေးချယ်စရာအများအပြားရှိပါတယ်.
အဆိုပါ ISACA စအဖြေများနှင့်ရှင်းလင်းချက်များနှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်မေးခွန်းတွေနဲ့နမူနာမေးခွန်းတွေနှင့်အတူလက်စွဲပေး. ဤရွေ့ကား CISM စာအုပ်များနှစ်စဉ် updated ပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းထားပါသည် 815 တစ်အပြည့်အဝနမူနာစမ်းသပ်မှုနှင့်အတူလေ့ကျင့် domains များကြောင့်ရွေးထုတ်လိုက်မျိုးစုံရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကို 200 ကျပန်းမေးခွန်းတွေ. ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုလက်စွဲလည်းသင်စာမေးပွဲလွန်ဖို့လိုအပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်ထက်မေးခွန်းတွေနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်. အပိုဆောင်းဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများကိုလည်းအသီးအသီးစာအုပ်သည်ရရှိနိုင်ပါသည်.
Review courses provided by the ISACA are held around the globe and vary in length, လေ့လာမှုပစ္စည်းနှင့်ကုန်ကျ. ပြင်းထန်စွာစာမေးပွဲဘို့သင့်ကိုပြင်ဆင်ထားရန်ရည်ရွယ်သုံးနေ့ရက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင်တန်းများပဲစာမေးပွဲများထဲမှခင်ရရှိနိုင်ပါသည်, သင်တို့မူကားလည်းသင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်နှင့်လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်. ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုတောင်းသောသူတို့ကိုမယူနိုင်ပါတယ်. ထို ISASCA ထံမှအများစုဟာပြန်လည်သုံးသပ်သင်တန်းများ၏နိမ့်ဆုံးကုန်ကျ $250 Non-အဖွဲ့ဝင်များသည်, ပုံမှန်အားဖြင့်ဦးရေအများဆုံး $1,500.
အဆိုပါ ISACA လည်းအတူတစ်အခမဲ့မိမိကိုယ်ကိုအကဲဖြတ်စာမေးပွဲကမ်းလှမ်း 50 မေးခွန်းများကို, သင်အမှန်တကယ်စာမေးပွဲအဘို့သင်တို့အဆင်သင့်စမ်းသပ်ဖို့ခွင့်ပြု.
အဆိုပါ CISM စာမေးပွဲနှင့် CISM စာမေးပွဲနေ့ရက်များ
ထို ISACA ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် CISM စာမေးပွဲသည်ကိုသင်မှတ်ပုံတင်နိုင်, သင်သည်သင်၏မှတ်ပုံတင်ရေး၏ပုံစံနှင့်မည်သို့အနီးကပ်ကြောင့်စာမေးပွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ် အခြေခံ. ကွဲပြားခြားနားသောအခကြေးငွေပေးဆောင်ရှိရာ. ကြိုတင်စာမေးပွဲနှစ်ခုမှသုံးပတ်ကြာ, သင်ပွင့်ပြသကြရတဲ့အခါတစ်ဦးဝန်ခံချက်လက်မှတ်စာရင်းပြုစုလက်ခံရရှိ, သင်သည်အဘယ်သို့ဆောင် ခဲ့. ရှိသည်, နေ့အဘို့နှင့်တစ်ဦးအချိန်ဇယား. သင်ကဓာတ်ပုံ ID နှင့်သင့်ရဲ့နှင့် Graduate လက်မှတ်ကိုဆောင် ခဲ့. ရှိသည်. အနည်းဆုံးတက်ပြပါရန်အရေးကြီးသည်က 30 စာမေးပွဲမရောက်ခင်မိနစ်, ဒီအချိန်မှာအနီးကပ်တံခါးရွက်အဖြစ်.
စာမေးပွဲရက်စွဲများသည်နှင့်အမျှ, ထို CISM စာမေးပွဲကိုဇွန်လနှင့်ဒီဇင်ဘာလများတွင်နှစ်ကြိမ်တစ်နှစ်လျှင်ရရှိနိုင်ပါသည်. အဆိုပါစမ်းသပ်မှုသည်သူ့ဟာသူလေးနာရီလောက်ကြာနှင့်ပါဝင်သည် 200 စုစုပေါင်းမေးခွန်းများကို, သင်မေးခွန်းနှုန်းနဲ့ပဲကျော်တစ်မိနစ်ပေးခြင်း. သငျသရ4မေးခွန်းနှုန်းရမှတ်နှင့်တစ်နိမ့်ဆုံးလာတာနဲ့အမျှရမှတ်လိုအပ်ပါတယ် 450, သို့မဟုတ်အကြမ်းဖျင်း 113 မှန်ကန်သောမေးခွန်းများကို. တစ်စုံမလင်ရမှတ် 800 မှန်မှန်ကန်ကန်အားလုံးဖြေဆိုရန်လိုအပ် 200 မေးခွန်းများကို. သင်ကငါးပတ်စာမေးပွဲပြီးဆုံးပြီးနောက်မေးလ်ထဲမှာသင့်ရဲ့ရမှတ်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်. သင်သည်သင်၏ရမှတ်လွန်ခြင်းနှင့်ရှိနှင့်တစ်ပြိုင်နက်, သင်သည်သင်၏လက်မှတ်ရရန်သင်၏ CISM ပလီကေးရှင်းတင်ပြနိုင်ပါတယ်.
သင်သည်သင်၏ CISM စာမေးပွဲရလဒ်များကိုများနှင့်တပြိုင်နက်, သင် ISACA က်ဘ်ဆိုက်အနေဖြင့်လျှောက်လွှာဒေါင်းလုဒ်ပုံနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် CISM လက်မှတ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. သင်တို့သည်လည်းအလုပ်၏အတွေ့အကြုံငါးနှစ်ကြာ၏သက်သေအထောက်အထားတင်ပြရန်ရှိသည်, သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ထံမှလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုချက်နှင့်အတူ. သင်အတွက် mail တပြိုင်နက်, ISACA သင့်လျှောက်လွှာကိုလည်းတင်ပြသွားမှာနဲ့, သင်အရည်အချင်းပြည့်မှီပေးအပ်ခြင်း, ပြဿနာများကိုသင့်ရဲ့လက်မှတ်. သင်တို့တွင်အလျှောက်လွှာကြေးပေးဆောင်ရပါ $50 အတွက်ပို့ပြီးခင်.
သာအတူ 50-60% ပထမဦးဆုံးအကြိမ် pass နှုန်းက , သင်စာမေးပွဲယူရှေ့တော်၌ထို CISM များအတွက်မေးခွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးလေ့လာသင်ယူရန်အရေးကြီးသည်ကသည်. ဖှဲ့စညျးလေ့လာမှုစာမေးပွဲဖြတ်သန်းသည်အရေးပါသည်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့သင်ယူမှုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စမ်းသပ်မှုမေးခွန်းတွေနှင့်အတူလက်ရှိကျွမ်းပေါ် မူတည်., သင် ISACA အကဲဖြတ်စမ်းသပ်တာအကဲဖြတ်ရန်နိုငျသော, သင်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့အတွက်လေ့လာနေချဉ်းကပ်မှုနိုင်.
သင်အနီးကပ်ဒါမှမဟုတ်လာတာနဲ့အမျှရမှတ်အနီးသို့မှန်လျှင်, ထို ISACA ရဲ့ထောက်ပံ့စာအုပ်များကို အသုံးပြု. လေ့လာသင်ယူအထောက်အကူဖြစ်နိုင်. ကိုလည်းသင်ရရှိနိုင်ပြန်လည်သုံးသပ်သင်တန်းများတယောက်ယူရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်. သင်စမ်​​းသပ်ပစ္စည်းနှင့်အတူရုန်းကန်နေကြမယ်ဆိုရင်, သင်ပစ္စည်းနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်နှင့်လွန်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန် third-party ကြိုတင်သင်တန်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်.
သင်ပွင့်ပြသရှေ့တော်၌ထို CISM လေ့လာသင်မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်လွန်သွားပြီးသောအာမခံနိုင်ရန်အတွက်ဒါကျင့်သောအရေးပါသည်. နိမ့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်လာတာနဲ့အမျှရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူ, လေ့လာနေ, စမ်းသပ်မှု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်နေ, နှင့်သေချာသင်အများအပြားအလေ့အကျင့်စာမေးပွဲအပေါ်ကောင်းမွန်စွာပြုကြပြီအောင်ပထမဦးဆုံးသင်အကောင်းဆုံးရမှတ်နှင့်အတူသွားခွင့်ပြု.
အကောင်းဆုံး CISM ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်းအမှတ်စဥ်လျှော့စျေး & နှိုင်းယှဉ်
ခြုံငုံ Rating ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
ဘ်ဆိုဒ် CISM SuperReview Simplilearn CISM CISM ExamPractice CISM အလုပ်ရှာဖွေရေးအကယ်ဒမီ
စျေးနှုန်း $665 $499
ကူပွန်ကိုရယူပါ $599 $449
ကူပွန်ကိုရယူပါ $599 $499
လျှော့ get $495
လေ့ကျင့်သည် မေးခွန်းများ 600 88 N / A N / A
လေ့ကျင့်သည် စာမေးပွဲဖြေဆို 52 65 ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ5ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ4ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ
ဗွီဒီယို သငျခနျးစာ 590 ဇာတ်ကြောင်းပြောမျက်နှာပြင် 16 hours 14 hours 15 ဗီဒီယိုသင်ကြားနည်းနာရီ
CPE Credit 40 ပြီးစီးအပေါ်သို့ CPEs 16 CPE ရဲ့ပူဇော်သက္ကာ အဘယ်သူမျှမ အဘယ်သူမျှမ
ပုံစံ အွန်လိုင်း, self-အရှိန်အဟုန် အွန်လိုင်း, self-PACE သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်
အွန်လိုင်း, self-အရှိန်အဟုန် အွန်လိုင်း, self-အရှိန်အဟုန်
အာမခံ6တစ်လတိုးချဲ့မှု
သငျသညျသှားမနေပါနဲ့လိုလျှင်7Day ကိုငွေရှာ-Back ကိုအာမခံ အဘယ်သူမျှမ7Day ကိုငွေရှာ-Back ကိုအာမခံ
အွန်လိုင်း ACCESS 180 နေ့ရက်များ 180 နေ့ရက်များ 180 နေ့ရက်များ 30 နေ့ရက်များ
Get Started ကို NOW က START NOW က START NOW က START NOW က START
ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/05/unnamed-2.png 500 500 ဂျိမ်း Edge ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/09/InfoSec-Logo1-300x41.png ဂျိမ်း Edge2018-04-05 17:08:002018-01-10 22:00:00CISM စာမေးပွဲ